Tattoo quruxsan oo loogu talagalay haweenka iyo ragga: su'aasha jinsiga? | Tattoo
Nat Cerezo | | Tattoos loogu talagalay dumarka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan qalinku waa jinsi la’aan. Sababtoo ah Dhib malahan hadaan kahadalno astaamaha Bonitos dumarka, si lamid ah taasi micno malahan hadaan kahadalno taatikada quruxda badan ee ragga.
Marka la soo koobo, maxaa Dhib malahan hadaad raadiso tattoos Bonitos haweenka ama ragga. Muhiimadu waa inaad ka heshay oo aad uxiratay sharaf, qofkasta oo aad tahay.
1 Saamaynta jinsigu miyey saamayn ku yeelanaysaa marka la samaynayo tattoo?
2 Marka maxaa noo horseedaya inaan ku aragno tattoos jinsi?
Saamaynta jinsigu miyey saamayn ku yeelanaysaa marka la samaynayo tattoo?
Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen ku heshiin doonno in tattoosku yahay nooc farshaxan ah, sida rinjiyeynta, farshaxan, majaajillo ama filimaan. Waxay u baahan yihiin aragtidooda farshaxanimo, taas oo marar badan aan ku koobnayn koobiyeynta naqshad waana intaas: farshaxanka wanaagsan ee tattoo wuxuu u qaataa beertiisa oo wuxuu u beddelaa gabal keligiis noqon karo, xitaa haddii uu ka shaqeynayo naqshad caan ah.
Sida farshaxanka oo dhan, noocyadu ma ahan inay shardi nooga dhigaan inaan jeclaanno shay ama wax kale oo badan. Dhab ahaan, mid ka mid ah hawlgallada ugu waaweyn ee farshaxannimadu waa inay innaga dhigto inaan dib uga fikirno waxyaabaha. Ayaa yidhi yaa casaan u ah gabdhaha buluugna wiilasha? Ayaa dhahay haweenku waxay helayaan tattoos balanbaalis iyo ragga dhakadaha dabka? Qof walba iyo qofna ma ahan amarro bulsheed oo aan iska iloobi karno caafimaadkeenna maskaxeed iyo farxaddeenna.
Marka maxaa noo horseedaya inaan ku aragno tattoos jinsi?
Haddii jinsigu uusan saameyn ku yeelan karin farshaxanka, maxaa dadka u horseedaa inay raadiyaan tattoos qurux badan oo loogu talagalay haweenka ama ragga? In kastoo hubaal mid ka mid ah sababaha ayaa ah in la raadiyo tusaalooyinka tatooyada qabow si loo arko sida ay ugu muuqdaan meydadka la midka ah kuweennaMa iloobi karno qodobka qaboojinta bulshada ee ay sida tooska ah u wataan.
Xaaladahaani way ka dhib badan yihiin oo sibylline ayey u eg yihiin marka loo eego jaleecada hore. Iyo inkasta oo aysan waligood noqon sababta aan u dooranayno hal tattoo ama mid kale, waa waxtar in lagu xisaabtamo marka la dooranayo nashqadeena xigta.
Tattoo-guhu waa farshaxan waligiis qaran dumis ah waxayna noqon doontaa wax laga xishoodo in loo dhiibo doorarka bulshada ee sunta ah. Noo sheeg, maxaad u maleyneysaa jinsiga ku jira tattoos? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos loogu talagalay dumarka » Tattoo quruxsan oo loogu talagalay haweenka iyo ragga: su'aasha jinsiga?
Tattoos loogu talagalay carruurta, seddex xal oo ku meel gaar ah